Football Khabar » युरो कप–२०२० को ड्र सार्वजनिक : पोर्चुगल, जर्मनी र फ्रान्स एकै समूहमा !
युरो कप–२०२० को ड्र सार्वजनिक : पोर्चुगल, जर्मनी र फ्रान्स एकै समूहमा !
अर्को वर्ष सन् २०२० मा आयोजना हुने युरोपको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता युरो कपका लागि समूह चरणको ड्र सार्वजनिक भएको छ । शनिबार राति रोमानियामा भएको ड्र अनुसार सन् २०१६ को साबिक विजेता पोर्चुगल, साबिक उपविजेता फ्रान्स र जर्मनी र एकै समूहमा परेका छन् ।
प्रतियोगिताको ‘ग्रुप अफ् डेथ’का रूपमा हेरिएको यी तीन हेभिवेट टोलीहरू समूह ‘एफ’मा परेका छन् । सो समूहको चौथो टिम भने प्ले अफ्बाट आउनेछ ।
त्यस्तै, समूह ‘ए’मा पनि बलिया टोली परेका छन् । जहाँ टर्की, इटाली, वेल्स र स्वीट्जरल्यान्ड भिड्नेछन् । समूह ‘डी’मा इंग्ल्यान्ड र क्रोएसिया परेका छन् । यता, समूह ‘ई’ मा स्पेन, स्वीडेन, पोल्यान्डलागत टोली परेका छन् ।
प्रकाशित मिति १४ मंसिर २०७६, शनिबार २३:४२